Xavi oo u diray Jamaahiirta Barcelona farriin wanaagsan ee ku aaddan xaaladda Araújo – Gool FM
Xavi oo u diray Jamaahiirta Barcelona farriin wanaagsan ee ku aaddan xaaladda Araújo
(Barcelona) 11 Maajo 2022. Tababare Xavi Hernandez ayaa fariin wanaagsan ee ku aadan xaaladda Ronald Araújo u diray Jamaahiirta kooxda Barcelona, kaddib dhaawac ka soo gaaray dhanka madaxa, inta ay socotay kulankii xalay ay la ciyaareen Celta Vigo.
Barcelona ayaa garoonkeeda Camp Nou ugu awood sheegatay kooxda Celta Vigo, kaddib markii ay kaga adkaatay 3-1, ciyaar qeyb ka ahayd kulammada horyaalka La Liga.
Inta ay ciyaarta socotay daafaca kooxda Barcelona ee Ronald Araújo ayaa dhulka ku dhacay, kaddib markii ay isku dhaceen saaxiibkiis Gavi.
Ciyaarta kaddib Tababare Xavi Hernandez ayaa fariin ku aadan dhaawaca Ronald Araújo, u diray taageerayaasha kooxda Barcelona:
“Waan baqnay markii hore, laakiin dhakhtarku wuxuu noo sheegay inuu miyir qabo xaaladiisuna wanaagsan tahay.”
“Araújo waxa uu caawa joogi doonaa cisbitaalka si loo hubiyo xaaladdiisa.”
“Waan baqnay, waxaana u malaynay in ay wax xun dhici karaan, balse nasiib wanaag Araújo wuxuu joogi doonaa guriga burrito.”
Intaas kaddib Tababare Xavi Hernandez ayaa ka hadlay guusha ay kaga gaareen Celta Vigo, garoonka Camp Nou, wuxuuna yiri:
“Waxaan helnay 3 dhibcood oo muhiim ah, malaha ma aanan u qalmin wax intaas ka badan, qeybta hore ma aanan fiicneyn, dareenkuna wuxuu ahaa inay ahayd inaan si fiican u ciyaarno.”
Si kastaba ha noqotee, Barcelona ayaa hadda ku jirta kaalinta labaad ee kala sarreynta horyaalka La Liga, waxana ay leedahay 72 dhibcood, iyada oo ku dhaw in ay xaqiijisato booska labaad, laba kulan kahor dhamaadka horyaalka Spain ee xilli ciyaareedkan.
Muxuu ka yiri Klopp kaddib guushii ay Liverpool ka gaartay Aston Villa?
Halyeey kooxda Liverpool ah oo ka digay in la dayaco Sadio Mane